Abakhiqizi nabahlinzeki begesi baseChina baseChina China Izindandatho Ezimbili
Ikhono: I-0.5T / h ~ 50T / h
Uhlobo: Steam Boiler
Ingcindezi: I-0.1Mpa ~ 3.8Mpa
Fuel: Igesi Yemvelo, i-LPG, i-Exhause gesi, i-Diesel, i-oli enkulu, i-Dual Fuel (igesi noma i-Oyili) njll.
WNS uchungechunge umusi kubhayela ovuthayo uwoyela noma igesi kuyinto ovundlile yangaphakathi omlilo ezintathu backhaul umlilo tube kubhayela, usebenzisa boiler esithandweni ezimanzi emuva isakhiwo, izinga lokushisa eliphakeme intuthu, igesi baphendukela shaya the backhaul intuthu ipuleti ipuleti yesibili neyesithathu ke emva egumbini intuthu. ukhishelwe emoyeni ngophamula.
Kukhona ama-Smokebox Cap angaphambili nangemuva ebhuthini, okulula ukulungiswa.
Umshisi omuhle kakhulu wemukela ukulungiswa kwesilinganiso sokulinganisa okuzenzakalelayo, ukulawulwa kwamanzi okuzenzakalelayo, ukuqala nokumisa uhlelo, ukusebenza okuzenzakalelayo nobunye ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, futhi kunenhlabamkhosi yezinga lamanzi ephakeme nePhansi kanye nokuvikelwa komsebenzi wamazinga wamanzi aphakeme kakhulu, ingcindezi ephezulu, icisha njll.
I-boiler inezici zesakhiwo se-compact, ephephile futhi ithembekile, ukusebenza okulula, ukufakwa okusheshayo, ukungcoliswa okuncane, umsindo ophansi, nokusebenza kahle kakhulu.
I-boiler ihlanganiswa nomzimba we-Boiler, chimney nohlelo lwamaphayiphu. Isidumbu se-boiler ne-chimney kuqediwe efektri, ipayipi, i-valve negeji ebhuthini nakho sekuphothuliwe efektri. Amakhasimende adinga kuphela ukuhlanganisa i-boiler ne-chimney ndawonye, ​​ukuxhuma igesi, amandla, amanzi bese
ukuze uvivinye ukusebenzisa, unciphise isikhathi sokufaka, futhi uqinisekise ikhwalithi ye-boiler.
2. Idizayini ethuthukisiwe, isakhiwo sonke, igumbi lokuhlangana le-Frontboxboxbox, umzimba unendawo yokushisa kanye negumbi lomlilo. Isakhiwo esikahle, icwecwe, ukusetshenziswa okuphansi kwensimbi, inyongo yesithando somlilo yicala lesithando somlilo, isendlalelo sokuvikela izinto ezintsha zokushisa, ukufakwa kweshidi lombala, ukuma kwempahla kungunxande, ukusebenza kwebhayela, isisindo, isakhiwo, usayizi, ukwakheka kokujwayeza ukwakheka okuthuthukile nokucabanga.
Idivaysi yamanzi okuphakelayo ihlomisa ngakwesokunene sesisekelo se-boiler, isakhiwo sonke, asidingi esinye isisekelo.
I-WNS Steam Boiler evutha uwoyela noma igesi
ImodeliInto WNS0.5-0.7-YQ WNS1-0.7-YQ I-WNS2-1.25-YQ I-WNS4-1.25-YQ WNS6-1.25-YQ
Ukucindezelwa Kokusebenzela okulinganiselwe
Kulinganiswe ngo-Steam Temp. ℃
Ukushisa Okuphezulu m²
Kufakiwe Overall Dimension
I-Boiler Isisindo Ton
Umthombo Wamandla V 380V / 50Hz
Imodeli Yokumpompela Amanzi
Uwoyela Okhanyayo / Uwoyela Osindayo / Igesi Lasedolobheni / Igesi Yemvelo
FuelUkusetshenziswa Amafutha akhanyayo
Igesi yemvelo 144.16
< Ibanga 1
ImodeliInto WNS8-1.25-YQ WNS10-1.25-YQ I-WNS15-1.25-YQ WNS20-1.25-YQ
I-Weishaupt / NU-WAY
Esedlule: Amafutha Steam Boiler
Olandelayo: Kuqondile Izinkuni / Amalahle Boiler
china igesi kubhayela
i-china igesi ebusayo i-boiler
china lpg kubhayela
I-boiler ekhishwe ngegesi, i-lpg boiler
ugesi wadubula isikebhe sokudambisa insimbi
lpg umusi kubhayela
i-boiler yegesi yemvelo
igesi yemvelo ebusayo i-boiler